ဂျမ်းပုံ – Page 256 – Celebrity,Knowledge,Helthy
လူ သိနည်းသေး တဲ့ မြန်မာ့ ရိုးရာ ရွှေဝင် ငွေဝင် နိမိတ်များ
September 1, 2020 - by yelin aung - LeaveaComment
လူ သိနည်းသေး တဲ့ မြန်မာ့ ရိုးရာ ရွှေဝင် ငွေဝင် နိမိတ်များ ၁။အိမ်ထဲ ဖားခုန်ဝင်မူ ငွေရအံ့။ ၂။အိမ်ထဲ ပိတုန်းဝင်မူ ဧည့်သည်လာအံ့။ ၃။အိမ်ထဲ ဓါးခုတ်ကောင်ဝင်မူ ပေးကမ်းမည့် ဧည့်သည်လာအံ့။ ၄။အလံတင်ရမူ ရည်မှန်းချက် အောင်မြင်အံ့။ ၅။တင်လိုက်သည့်အလံ ပြန်လျှောကျမူ ဘေးတွေ့အံ့။ ၆။ ခွေးလက်ဆောင်ရမူ၊ အိမ်တွင် ခွေးလာနေမူ မိတ်ဆွေကောင်းရအံ့။ ၇။ …
ရန်ကုန်မြို့က မြို့နယ် (၇) ခုကို Semi Lockdown ချ၊ မလိုက်နာလျှင် ဥပဒေအ ရ အရေးယူမည်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထဲက မြို့နယ် (၇)မြို့နယ်ကို Semi Lockdown ချလိုက်တယ်လို့ အစိုးရက ဒီနေ့ စက်တင်ဘာ လ ၁ ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီမြို့နယ်တွေကတော့ သင်္ဃန်းကျွန်း၊ အင်းစိန်၊ မြောက်ဥက္ကလာ၊ သာကေတ၊ လှိုင်၊ ပုဇွန်တောင်နဲ့ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီမြို့နယ်တွေမှာ နေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ Stay at Home အစီအစဉ်ကို ကျင့်သုံးကြဖို့နဲ့ အမိန့်ကြေညာချက်ဟာလည်း …
နိုင်ငံဝန်ထမ်း များအား လစာ ၂ လစာ အတိုး မဲ့ ထုတ်ချေးမည် ..
September 1, 2020 September 1, 2020 - by yelin aung - LeaveaComment
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အ စိုးရ စီမံကိန် နှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာ န ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံးနိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း(အမြဲတမ်း)များကို လစာ( ၊ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက် ၂)လ စာ ကြိုတင်ထုတ်ပေးပြီး အတိုးမှုဖြင့် ထုတ်ချေးနိုင်ရန် အမှန်လိုအပ်ငွေစာရင်း ပေးပို့ရန်ကိစ္စအကြောင်းအရာ၊ ရည်ညွှန်းချက် ။ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာ န၊ ပြည်လောင်စု ဝန်ကြီးရုံး၏ ၃၁ – ၈ …
ရုရှားထက်ပိုစိတ်ချရတဲ့ တရုတ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးနှင့် FDA က အသုံးပြုခွင့်ပေးတော့မည့် အမေရိကန် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး
Co vid-19 ကာကွယ်ဆေးဘယ်တော့ရမှာလဲ..? နိုဝင်ဘာ လ ၃ ရက်နေ့ အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် အမေရိကန် FDA ကနေ ကာကွယ်ဆေးတစ်ခုခုကို အနည်းဆုံး emergency authorisation အရေးပေါ်အသုံးပြုခွင့်ပေးမှာ သေချာသလောက်ရှိပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးပြိုင်ဆိုင်မှုမှာ အ ဓိက နှစ်အုပ်စုကွဲပါတယ်။ (၁) ပိုမိုစိတ်ချရတဲ့ကာကွယ်ဆေးကို ထုတ်လုပ်ချင်တဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေနဲ့။ (၂) ကာကွယ်ဆေးရပြီဆိုပြီး လက်ဦးမှုယူကြေညာချင်တဲ့ တရုတ်နဲ့ ရုရှားတို့ဖြစ်ပါတယ်။ …
သာသနာ့ဝန်ထမ်းဖြစ်သော်လည်း မိဘကို ကျွေးမွေးပြုစုတဲ့ ဦးဇင်းတစ်ပါး
မိဘဆိုတာ ကျေးဇူးကြီးမားလှပါတယ်…တချို့တွေက မိမိကို ငယ်စဉ်ကနေကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်လာခဲ့တဲ့ မိဘတွေကို အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ပြန်မစောင့်ရှောက်ကြပါဘူး… အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မိဘကို စွန့်ပစ်မှုတွေလုပ်တဲ့အထိ ရှိလာသလို တချို့ကတော့ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုတွေ မလုပ်နိုင်အားကြပါဘူး… ခုဖော်ပြထားတဲ့ ဓာတ်ပုံလေးထဲမှာတော့ ဦးဇင်းတစ်ပါးဟာ အဖေဖြစ်သူကို ပြုစုကျွေးမွေးနေတာကိုတွေ့ရမှာပါ… လူ့ဘဝကို စွန့်ပြီး သာသနာ့ဝန်ကို ထမ်းနေသူဖြစ်ပေမဲ့ သားကောင်းတစ်ယောက်ပီသစွာနဲ့ မိဘကို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတာပါ… ဒါကြောင့် ပုထုဇဉ် ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ဦးဇင်းကို …
ဝမ်းသာစရာ သတင်းတော့ ကြားရပါပြီ ပါမောက္ခကြီးတွေနဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေ နေပြည်တော်ကို တင်ပြလိုက်ပါပြီ
ဝမ်းသာစရာ သတင်းတခုတော့ ကြားရပါပြီ။ ပါမောက္ခကြီးတွေနဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေ နေပြည်တော် တင်ပြလိုက်ပါပြီ အခုကူးစက်မှုတွေ မြင့်တက်လာလို့ အများပြည်သူ စိတ်ပူပင်သောကတွေ ရောက်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု ရောဂါပိုး (ဗိုင်းရပ်စ်) ဟာ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလာပါတယ်လို့ သုံးသပ်ကြပါတယ်။ ရောဂါပိုး ကူးစက်မှုတော့များမယ်၊ ရောဂါပြင်းထန်နှုန်း ကစိုးရိမ်စရာမရှိနိုင်ဘဲ ပုံမှန် တုပ်ကွေးဖျားသလိုပဲ အားပျော့သွားနိုင်တယ်လို့ ဆေးပညာရှင်တွေက သုံးသပ်လာကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကွာရန်တင်း …
ကယားပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်အား ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ မဲခွဲဆုံးဖြတ်၍ ဖြုတ်ချ
ကယားပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်အား ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ မဲခွဲဆုံးဖြတ်၍ ဖြုတ်ချ… ကယားပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဦးအယ်လ်ဖောင်းရှို ကို ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော်တွင် ယနေ့ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာ စွပ်စွဲပြစ်တင်သည်ကို ထောက်ခံသည့်မဲ ၁၆ မဲ ကန့်ကွက်သည့်မဲ ၄ မဲဖြင့် ဝန်ကြီးချုပ် အဖြုတ်ချခံရကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါဖြုတ်ချခံရသည်သတင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စက်တင်ဘာ ၁ ရက် ကယားပြည်နယ် ဖရူဆိုမှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် …
တရုတ်၏ ကျူးကျော်မှုကို ရင်ဆိုင်ရန် အစွမ်းကုန် အသင့်ပြင်ဆင်လျှက်ရှိနေတဲ့ တိုင်ဝမ်နိုင်ငံ
တိုင်ဝမ်သည် အမေရိကန် ကူညီသည် ဖြစ်စေ မကူညီသည် ဖြစ်စေ တရုတ်၏ ကျူးကျော်လာမှုအား ရင်ဆိုင်ဟန့်တားနိုင်ရန် စစ်တပ်ကို မွမ်းမံ ပြင်ဆင်လျှက် ရှိနေသည်ဟု ဩဂုတ် လ ၃၀ ရက်နေ့ထုတ် နယူးယောက်တိုင်းမ် သတင်းစာကြီး တွင် အကျယ်တဝင့်ရေးသား ဖေါ်ပြခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် လအတွင်း အာရှတွင် တရုတ်၏ ရန်လိုမှုများ တိုးမြှင့် ပြုလုပ်လာနေခြင်းနှင့် ဟောင်ကောင်တွင် …
ဗိုက်ပူလို့ အလှပျက်နေတဲ့ ကိုကို မမ ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ်များ အတွက် (၇) ရက်အတွင်း ဗိုက်ချပ်ပြီး အဆီကျစေတဲ့ ဆေးနည်း
မိန်းကလေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ယောင်္ကျားလေးဘဲဖြစ်ဖြစ် အလှအပကို မြတ်နိုးတတ်ကြတာ သဘာဝပါ။ ဒါ့ကြောင့် ဗိုက်ခေါက်ထူ၊ ဗိုက်ပူပြီး အဆီများ နေသူတွေအတွက် လက်တွေ့ ၇ ရက်အတွင်း သိသိသာသာ ဗိုက်ချပ်ပြီး အဆီကျစေတဲ့ ဆေးနည်းလေးကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ဆေးနည်းက အလွန်လွယ်ပြီး အကုန်အကျလည်း အလွန်သက်သာပါတယ်။ အိမ်မှာ ရှိတတ်တဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေကို ရောစပ်ပြီး အသုံးပြုရမှာပါ။ ပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ …
Mask မတပ်ပဲ သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ ပြည်သူတွေကို ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ဖို့ ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီဗျာ
1.9.2020 ရက်နေ့မှစမန္တလေးမြို့တွင် းMask မတပ်ပဲ ကားမောင်းဆိုင်ကယ်မောင်းလမ်းလျှောက်ပါက အလုပ်ကြမ်းနဲ့ထောင်တစ်လ….ပြည်သူတွေ သတိထားကြဖို့ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်…. ယခုလို အစိုးရက စည်းကမ်းတွေ တင်းကျပ်နေတာဟာ ပြည်သူတွေကို ချစ်လို့ နိုင်ငံတော်ကြီးကို ချစ်လို့ စည်းကမ်းတွေ ထုတ်ပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်.. .ပြည်သူတွေကလည်း အစိုးရရဲ့ စေတနာကို နားလည်သောအားဖြင့် စည်းကမ်းတွေကို တလေးတစားနဲ့ လိုက်နာပေးကြပါလို့ အကြံပြုရင်း စေတနာကောင်းဖြင့် Unicode 1.9.2020 ရက်နေ့မှစမန္တလေးမြို့တွင်း Mask …
တသက်လုံး ဂရုမစိုက်ခဲ့တဲ့ တရုတ်အစိုးရဟာ ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆီကို အရေးတကြီးဘာလို့လာလဲ (လွတ်သွားမယ့် ငါးက ကြီးမှာ သိပ်ကြောက်တတ်နေတာ တရုတ်အစိုးရ)
တသက်လုံး ဂရုမစိုက်ခဲ့တဲ့ တရုတ်အစိုးရဟာ ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆီကို အရေးတကြီးဘာလို့လာလဲ (လွတ်သွားမယ့် ငါးက ကြီးမှာ သိပ်ကြောက်တတ်နေတာ တရုတ်အစိုး ရ) တရုတ် နိုင်ငံခြားရေးဌါနက ဘာလို့လာသလဲ ????? တသက်လုံး ဂရုမစိုက်ခဲ့တဲ့ တရုတ်အစိုးရဟာ ခုတော့ မြန်မာဆီကို အရေးတကြီးလာပြီ ဖြစ်တယ်.. အဆင့်မြင့် နိုင်ငံခြားရေးအရာရှိ ယန်ကျားချီ မနက်ဖြန် မြန်မာကို ရောက်မယ်ဖြစ်တယ်.. ဘာလို့လာသလဲ …
ချစ်စရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ ပုံစံလေး နဲ့ ပိုစ့်တွေပေး နေတဲ့ ချောကလျာ
အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ တက်သစ်ဆ မော်ဒယ်လ် ချောကလျာ ကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောကကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ်အများအပြားရဲ့ အားပေးဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်းရရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံ အားပေးမှုရရှိထားတဲ့သူမကတော့ social media လောကမှာ နာမည်တစ်လုံးနဲ့ ရပ် တည်နေသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး …
Total visitors : 557,964
Total page view: 808,327